Weebụsaịtị ozi WWDC 2016 | Esi m mac
Nkọwapụta na-amalite site na weebụsaịtị WWDC 2016
Fewbọchị ole na ole agafeela mgbe onye enyemaka olu Siri gwara anyị ihe niile na-aga n'ihu na Onye Mmepụta Apple Mmepụta ga-amalite site na June 13 ruo 17. Ọ bụ ogbako onye nrụpụta nke dị mkpa karịa ndị gara aga na ọ bụ oge mbụ ndị mmepe sitere na nyiwe iOS, OS X, watchOS na tvOS gbakọtara.
Bọchị mgbe Siri kwụsịrị ịgba asịrị banyere WWDC 2016, Apple n'onwe ya kwadoro na mgbasa ozi ụbọchị nke ihe omume n'otu oge ahụ nke malitere usoro ndebanye aha maka ndị mmepe chọrọ ịga iji gaa n'ihu raffle nke tiketi.
Ebe nrụọrụ weebụ nke Apple kere maka ihe omume WWDC 2016, dịka ọ na-enweghị ike ịbụ obere, na-egosi ụfọdụ koodu nke ị nwere ike ịgụ ma ntuziaka maka ịmepụta ngwa na ozi ihe omume ahụ n'onwe ya. N'afọ a Apple chọrọ ịtọ nhazi na ihe ọtụtụ puku ndị mmepe ji ahụ kwa ụbọchị.
Otú ọ dị, ugbu a na ọtụtụ ụbọchị agafeela kemgbe ebe nrụọrụ weebụ ahụ ahụwo ìhè, ịkọ nkọ na-amalite na ọ bụ na ndị ọrụ nyochaa ọbụna ntakịrị nkọwa iji chọọ "arụkwaghịm" site na Apple ma ọ bụ "akwa ndị ọzọ" ndị na-emepụta web ahụ ha nọbu ike idowe nakwa na ha nwere ike inye ozi gbasara ihe anyị nwere ike ịchọta na Isi mmalite nke mmemme a.
N'elu isiokwu a anyị na-egosi gị nseta ihuenyo nke isi peeji nke web raara nye WWDC 2016 nke anyị nwere ike ịgụ ọtụtụ usoro nke koodu, nke ọ bụla nwere ihe ọ pụtara na ozi. Otú ọ dị, ọ bụrụ na anyị elee akara ikpeazụ nke koodu anyị nwere ike ịgụ "Ndewo nnukwu echiche". Enweela ọtụtụ ndị na-eso ụzọ na-akọwapụta na akara a na-ezo aka mbata nke sistemụ OS XI ọhụrụ nwere ọtụtụ ndozi yana na a ga-akpọ ya macOS. Ihe ndị ọzọ na-ekwu bụ na ndị si Cupertino ga-eweta ihe dị ezigbo mkpa maka ihe gbasara ngwaike na ọtụtụ ndị ọzọ anaghị emecha hụ ihe ọ bụla na koodu ahụ anyị gosiri gị.
Ihe doro anya bụ na anyị ga-echere ruo na June 13 iji mara nke ọma ihe Apple kwadebeere anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Nkọwapụta na-amalite site na weebụsaịtị WWDC 2016
Apple na-ebiputa vidiyo ohuru iji mee ememme Earthwa, oge a na Siri na Liam
RAW Ndakọrịta Mmelite maka Digital ese foto 6.19